प्रचण्ड र बाबुरामसँग विप्लवका नेताको सहकार्यको प्रस्ताव ! - Kantipath.com
प्रचण्ड र बाबुरामसँग विप्लवका नेताको सहकार्यको प्रस्ताव !
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले राजनीतिक भेटघाटलाई तीब्र पारेका छन्। विप्लव माओवादीका प्रभावशाली नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेका छन्। विप्लव भने अहिले कपिलवस्तुस्थित आफ्नै घरमा रहेर खेतीपातीमा व्यस्त छन्। चर्चाका लागि जनमत संग्रह भन्दै आए पनि विप्लवले त्यो किन आवश्यक परेको हो र केका लागि गर्न चाहेका हुन् भन्ने चाहिँ खुलाएका छैनन्।
कुनै समयमा ‘सहयोद्ध’ नेताहरुबीच शनिबारको भेटमा समसामयीक राजनीतिबारे कुरा भएको जनाइएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न बास्तोलासँगै उदयबहादुर चलाउनेसमेत खुमलटार पुगेका छन्। बास्तोलाले प्रचण्डसँग प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद लगायतका विषयमा छलफल भएको बताएका छन्।
‘समसामयिक नेपाली राजनीति, विघटित अवस्थामा पुगेको संसदीय व्यवस्था र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समाधान दिन प्रस्ताव गरेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद लगायतका बिषयहरुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सौहार्द छलफल’, प्रचण्डसँगको तस्बिर राख्दै बास्तोलाले लेखेका छन्।
यस अघि बास्तोला र चलाउनेले बुधबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुरामलाई समेत भेटेका थिए। भेटमा समसामयिक राजनीतिक बिषयमा छलफल भएको बास्तोलाले बताएका छन्। भट्टराई निवास टोखामा भएको भेटमा जसपा नेता भक्तबहादुर शाह पनि थिए।
केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएका विप्लवले ‘जनमत संग्रहको अजेन्डाका लागि’ भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग वार्ता गरेका हुन्। केही दिनअघि बाबुरामको निवासमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला र उदयबहादुर चलाउनेले भेट गरी सहकार्यको प्रस्ताव गरेको एक नेताले बताए।
भेटका अवसरमा प्रचण्डले अहिले ‘प्रतिगमनकारी ओली विरुद्धको लडाइँमा लगेकाले’ यो लडाइँ सफल भएपछि मात्र जनमत संग्रहको विषयमा कुरा गर्ने बताएको विप्लवनिकट एक नेताले बताए। भेटका क्रममा दुवै नेताले मिल्ने मुद्दाका विषयमा सहकार्य गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएको एक नेताले बताए।
Previous Previous post: सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे पनि बोल्नुपर्छ, सांसद बँधुवा मजदुर होइनन् : खरेल
Next Next post: मन्त्रीले देखे प्रहरीको ‘पावर’ : ट्राफिक नियम तोड्दा गाडीमा ‘ह्विल लक’